Injiniya uye R&D - Shanghai Chigong Industrial Co, Ltd.
Isu tinoshanda pamwe neChina main simbi zvigayo zvekuvandudza simbi ine yakanaka alloy zvinhu kuti tiwane akakodzera michina zvivakwa zvedenderedzwa simbi yekubatanidza ngetani inoshandiswa mumigodhi nekusimudza zvikamu. Sefeketani yeketani kwemakore makumi matatu, kunzwisisa kwedu uye mhinduro yekutenderera kwekubatanidza cheni kuita mumaindasitiri akasiyana siyana zvakabatsira zvakanyanya kukudziridzwa kwenzwi chiwanikwa simbi zvinhu nezvigayo.
-Robotization & otomatiki ekutenderera yekubatanidza cheni kugadzira
Izvi zvakazadzikiswa mu2018, asi neinjiniya mainjiniya R & D kwemakore akati wandei. Iyi nhanho huru yekumberi yakaguma ne:
Round link cheni yemhando yekuvandudza uye kugadzikana kune yepamusoro nhanho;
Kugadzira kwekugadzira (maererano nehunhu) yakavandudzwa zvakanaka;
Kuchengetedza kwekuchengetedza kwevashandi;
Fekitori mainjiniya kugona kwakasimbiswa uye kukurudzirwa kune ramangwana zvigadzirwa.
Chinongedzo hachizivikanwe kusvikira kupisa-kurapwa.
SCIC ngetani dzinopihwa kumwe kunetsa kunyorera, kusanganisira kuchera cheni kwekuparadza uye kupfeka mamiriro uye kusimudza nhumbi kwese kwekuchengeteka kunodiwa; kupisa-kwekurapa tekinoroji kunoona cheni chinongedzera hunhu kubva pakati kusvika kumusoro, kuti ikwane kune yakaoma mamiriro ekushanda. Kuomarara, kusimba kwesimba, kureba, kushomeka, kuneta, nezvimwewo, zvese zvinhu zvakakosha izvo kupisa-kurapwa kweinjiniya kunogona kubatsira kuvaka mune yega ketani yekubatanidza.
-FEA / FEM uye kuneta bvunzo
Isu tinotora FEA / FEM kukwidziridza denderedzwa ketani yekubatanidza dhizaini, zvichikonzera kuita kuri nani uye hupenyu hwakareba.
Izvo zvinobatsira zvakare kuvandudza nyowani modhi / dhayidhi cheni zvinongedzo uye zvinongedzo, kungave kune chikumbiro chemutengi kana kugadzira zvisizvo zvitsva mhinduro dzemabhizimusi
Round link yecheni kupfeka inosiyana zvakanyanya zvichienderana nechinangwa chekupfeka, icho chingave chekuchengetedza kwenguva yakareba, kana cheye anti corrosion, kana cheye anti kupfeka, kana chekuzivikanwa kwemavara, nezvimwe.
SCIC denderedzwa yekubatanidza ngetani yekunamatira inofukidza epoxy kupenda, electro galvanizing, inopisa yakanyorova galvanizing, sherardizing, nezvimwe.
Isu takavhurika kuti tishande kune vatengi zvakatarwa neketani yekudhira zvinodiwa.